UI/UX Fundamentals - Cohort 1
UI/UX Fundamentals Online Course
UI/UX ကို အခြေခံကစပြီး ကိုယ်တိုင်အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ Web and Mobile Design တွေဆွဲတတ်လာအောင် စနစ်တကျသင်ကြားပေးမယ့် ဖန်တီးရာရဲ့ UX Design သင်တန်း
UI/UX ကို ဘာကြောင့်တတ်မြောက်ထားသင့်တာလဲ?
2019 ခုနှစ်က ထုတ်ပြန်တဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ popular ဖြစ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေထဲမှာ UI/UX Designer တွေဟာ ထိပ်ဆုံး၁၀နေရာကနေ ပါ၀င်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း UI/UX Design ပညာရှင်တွေဟာ လစာမြင့်မားတဲ့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေကလည်း အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ UI/UX Designer တွေကို လိုအပ်နေတဲ့အတွက် အပြိုင်အဆိုင် ခေါ်ယူနေကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖန်တီးရာကနေ Web and Mobile Design ကို ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲတတ်လာအောင် အထူးရည်ရွယ်ထားတဲ့ UI/UX Design Course Onlineကနေ ပြန်ဖွင့်ပေးတော့မှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ UX Designer တွေ အရည်အသွေးပြည့်မီအောင် ဖန်တီးပေးလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့ UXMM နဲ့အတူ ပူးတွဲဖွင့်လှစ်တဲ့ ဒီသင်တန်းမှာဆိုရင် Modules (9) ခုပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Pre - Survey
UXMM - UI UX Design Fundamentals Course Outline
00 - Class Session Recording ( August 8 )
00- Student NPS ( August 8 )
01 - What is User Experience Design UXD
02 - Definition of UX
03 - Why should we care about UXD
04 - HCI
05 - Where is User Experience Today
06 - UI vs UX
07 - Different Between UI & UX
08 - History of UX
09 - Step 1: Learn the Rules
10 - Step 2: Learn UX Process
11 - Step 3: Find Inspiration
12 - Step 4: Read Design Articles Everyday
13 - Step 5: Practice Makes Perfect
14 - Step 6: Learn the Latest Design Tools
15 - Step 7: FindaMentor
Module 1 - Questions
Module 1 - Q&A
Module2- UX Design
Class session Recording - August 15
Student NPS - August 15
01 - UX Design Principles
02 - What is Design Thinking
03 - Design Thinking Process
4 - Empathize
05 - Define
06 - Ideate
07 - Prototype
Module2- Q&A
Module3- UI Design
Class session recording - August 22 - UXUI
Student NPS - August 22
3.1 - Understanding UI Design
3.2 - Design Priciple
3.3 - Color Theory
3.4 - Typography
3.5 - Iconography
Module3- Question
Module4- Design Guidelines
Class session recording - August 29
Student NPS - August 29
01 - Design Guide line
02 - Responsive and Adaptive Web Design
03 - Responsive Breakpoints
04 - Responsive Grid Layout
05 - Grid system
06 - Elevation # Material Design
07 - Layout # Material Design
09 - Color # Material Design
10 - Typography # Material Design
11 - Shape # Material Design
12 - Icon # Material Design
13 - IOS - Human Interface Design
14 - Difference between Andriod and IOS
15 - Design Trend
Module 4- Question
Module5- Design Thinking & Process
Class session recording - September 5
Student NPS - Sep 5
01 - Product Design Brief
02 - Use Case
03 - User Journey
05 - Card Sorting
04 - User Flow
06 - Online Shopping Process
06 - Online Shopping Process ( Planning )
07 - Online Shopping Process ( Inspiration )
08 - Online Shopping Process ( Mood Board )
09 - Online Shopping Process ( Sketching)
Student Resources - Product Design Brief Template
Student Resource - Wireframe Printable Templates
Module5- Project Assignment
Module6- Wireframing
Student NPS - Sep 12
Sep 12 - Class Session Recording
6.1 - Intro
6.2 - What is Wireframing
6.3 - Type of Wireframe
6.4 - Fidelity
6.5 - Let's start wireframing
Create wireframe for the website home page of FNC Fashion
Student Resources - Mobile Wireframe Printable Templates
Student Resources - Website Wireframe Printable Template
Module7- Prototyping
Student NPS - Sep 19
uxui - September 19 ( Part2)
Module7- Wireframing (September 19 - part 1 )
Classroom XD file
2 - What's on xd
4 - Layering
6 - Let's start prototyping
7 - Let's start prototyping - Part 2
8 - Let's start prototyping - Part 3
9 - Let's start prototyping - Part 4
Module 8 - Projects & Portfolio
Student NPS - Sep 26
September 26 - Class Session Recording
October 17 - Class Session Recording
သင်တန်းဖွင့်မည့်ရက် -၁၉. ၁၂.၂၀၂၀
သင်တန်းချိန် - 4:30 PM to 6:30PM (အပတ်စဉ် စနေ)
သင်တန်းကြာချိန် - ၂လ
‍‍‍‍‍‍သင်တန်းကြေး - 200,000 MMK (အထူး Discount Planတွေလည်းရှိနေတယ်နော််)
Discount အစီအစဉ်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ
🤔Early Bird Discount အနေနဲ့ အောက်တိုဘာ ၃၁မတိုင်ခင် အပ်မယ်ဆိုရင်5% discount
🤔နိုဝင်ဘာလမှာ ဖွင့်လှစ်မယ့်သင်တန်းတွေကို ပေါင်းပြီး ပြိုင်တူအပ်နှံမယ်ဆိုရင်5% discount
🤔မိမိနဲ့အတူ သူငယ်ချင်းတွေပါ ခေါ်လာမယ်ဆိုရင် 5% discount
🤔Phandeeyar Institute မှာ သင်တန်းတက်ဖူးတဲ့သူဆိုရင် ဘယ်သင်တန်းကိုတက်တက် 5% discount
🤔ဒါမှမဟုတ် သင်တန်းနှစ်ခုကို သူငယ်ချင်းတွေပါခေါ်လာရင်တော့ 10% or 15% discount (alumniပါဖြစ်နေရင်) ရရှိမှာပါ။
ဘယ်သူတွေ တက်ရောက်သင့်တာလဲ ?
UI/UX Design ကို အခြေခံမှစတင်ပြီး လေ့လာတတ်မြောက်လိုသူများ
ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ Junior Mobile and Web Designer အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလိုသူများ
🔆 Phandeeyar Institute ကနေ ဖွင့်လှစ်ပေးမယ့် ၂လတာကြာမြင့်မယ့် ဒီသင်တန်းမှာဆိုရင် အပတ်စဉ်သင်ခန်းစာVideo တွေပါဝင်ပြီး Online ကနေ Instructor နဲ့ အပတ်စဉ်မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်ရိုက်သင်ယူလေ့လာသင်ယူဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် သင်တန်းမှာ Real-world Projects တွေကိုလည်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်သင်ယူရမှာတဲ့အတွက် အမှန်တကယ်တတ်မြောက်ဖို့ အာမခံပါတယ်။
🔆 သင်ခန်းစာတစ်ခုပြီးတိုင်း လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရမယ့် Assignment တွေ Quizes တွေကို လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး Final Project ပြီးဆုံးမှသာ Certificate ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
🔆 သင်ခန်းစာတွေကို Phandeeyar Institute ရဲ့ Online Learning Platform မှာ တင်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းတက်ရောက်တဲ့သူတွေဟာ မိမိအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာ သင်ယူလေ့လာနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ သင်တန်းအပ်နှံထားတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ်ပိုင် acc တစ်ခုစီရရှိမှာဖြစ်ပြီး လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်တန်းဆရာနဲ့လည်း အပတ်စဉ်မိမိရဲ့ Progress ကို လေ့လာဆွေးနွေးနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Phandeeyar Institte မှာ ဖွင့်လှစ်နေတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာသင်တန်းအစီအစဉ်တွေအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့ အခုပဲ Phandeeyar Institute page Messenger (သို့) ဖုန်းနံပါတ် 099 57 2580 17, 099 62 6290 06, 09783184069 (သို့) http://www.phandeeyar.institute/ တို့မှာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
© Copyright Phandeeyar Institute 2022